Famorehana… ifotony | NewsMada
Mahabe resaka ny amin’ny fanorenana ifotony. Na hatao alohan’ny fifidianana io, na any aoriana. Mbola adihevitra ny amin’izay. Politika! Ho hita eo… Mandra-pitrangan’izay hitranga, mila jerena akaiky sy dinihina lalina ity hoe fanorenana ifotony. Fanovana rafitra, lalàna, fomba fiasa… Araka ny maha Malagasy io fa tsy alain-tahaka fahatany amin’ny any ivelany. Mbola adihevitra koa ny amin’izay.
Mandra-piovan’izay hiova koa, mila jerena ny zava-misy tato ho ato: famorehana… ifotony fa tsy fanorenana ifotony loatra. Nahoana? Misy ihany tsinona izay heverina ho karazana fanorenana ifotony. Nefa famorehana ifotony amin’ny fananganana rafitra vaovao, araka ny fijerin’ny sasany azy. Miara-dalàna ho azy amin’izany ny lalàna vaovao nananganana rafitra itsy na iroa. Mitondra inona ho an’ny firenena?
Anisan’izany, ohatra, ny rafitra manokana hiandraikitra fifidianana: tsy fahita any amin’ireo firenen-dehibe mandrisika amin’izany, maka ny asan’ny minisiteran’ny Atitany. Eo koa ny karazan-drafitra iadiana amin’ny kolikoly, manao ny asan’ny mpitandro filaminana; eny, na ny fitsarana manokana misahana ny kolikoly aza, ny fitsarana manokana momba ny raharaha fanondranana antsokosoko andramena sy hazomainty.
Mbola hisy ny fitsarana hiadidy ny halatra omby; fanondranana antsokosoko volamena, vatosoa, sokatra… ? Eny, na ny fitsarana hisahana ny halatra akoho, paiso… Sanatria. Nahoana loatra? Tsy mahavita ny asany sy tsy azo itokisana intsony tsinona ny fanjakana. Vokany, mila rafitra hafa ivelany ny tsy fanjariany. Ny mpitondra tokony hiady amin’ny kolikoly, ohatra, no manao kolikoly? Na izay akaiky azy…
Toy izany koa amin’ny karazana tsy fanarahan-dalàna na halatra amin’ny fifidianana, raharaham-panjakana, harem-pirenena…? Lasa tsy misy lanjany sy hasiny ho azy ny fanjakana amin’ireny karazan-drafitra ireny. Izay ilay famorehana ifotony: fitaka hoe tena atao itsy sy iroa ary tena manao ny fanjakana, nefa ny tsy fanjariany sy ny tsy fahombiazana ny antony. Mba tsy ho izany ny hoe fanorenana ifotony?